Munaasabad laagu maamuusayo maalinta Qaxootiga oo lagu qabanayo Galkacyo, uuna ka qaybgalayo u-qaabilsanaha QM ee arrimaha Qaxootiga Mark Bowden. – Radio Daljir
Munaasabad laagu maamuusayo maalinta Qaxootiga oo lagu qabanayo Galkacyo, uuna ka qaybgalayo u-qaabilsanaha QM ee arrimaha Qaxootiga Mark Bowden.
Juunyo 20, 2010 12:00 b 0
Galkacyo June 20 ? Waxaa maanta meelo badan oo ka mid ah dacallada adduunka si weyn looga dabbaal-degaya maalinta loo aqoonsaday Qaxootiga adduunka ee 20 bisha June taasi oo sanadkasta loo sameeyey munaasabo aad u waaweyn. Deegaannada Puntland oo ka mid ah meelaha tirada yar ee ay ku soo qaxeen barakacayaal aad u tiro badan oo ka soo cararay dagaallada dabo-dheeraaday ee koonfurta Soomaaliya iyo Qaxooti iyagana ka soo haajiray waddamada dariska la ah Soomaaliya ayaa si baaxad leh looga maaamusay maalinta Qaxootiga caalamka ee 20 June.
Mid ka mid ah munaasabadaha waaweyn ee loogu dabaal-degayo maalinta Qaaxootiga Caalamka ee lagu qabanayo Puntland, waxay goordhaw ka dhacaysaa magaalada Galkacyo, taasi oo ay ka qaybgalayaal madax aad u tiro badan oo iskugu jira dawladda, Hay?adda UN iyo bulshada rayidka ah.
Xafladdaan oo ay soo qaban-qaabisay hay?adda Qaxootiga adduunka ee UNHCR, ayaa madaxda lagu casumay ee ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah u-qaabilsanaha QM ee arrimaha Qaxootiga Mark Bowden, madaxda hay?adaha QM ee ka hawlgala gobolka Mudug, mas?uuliyiinta dawladda ee isla gobolka Mudug, xubno ka tirsan golayaasha Baarlamaanka iyo xukuumadda iyo mas?uuliyiin ka tirsan dadka qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaalida ah ee gobolka ku soo qaxay.
Munaasabadda oo la-filayo in ay mar dhaw si rasmi u bilaabato ayaa la qorshaynaa in si qoddo-fog looga hadli doono arrimaha Qaxootiga gaar ahaan sidii loo illaalin lahaa xuquuqda Qaxootiga iyo dadka baracayaasha ah ee ka soo fara-baxay dagaallada joogsan waayey ee koonfurta iyo gobollada dhexe Soomaaliya.
Ma?ahan markii ugu horraysay munaasabad noocaan oo kale ah oo lagu weynaynayo maalinta Qaxootiga adduunka lagu qabto magaalada Galkacyo iyo deegaannad Puntland-ba.
Wixii ka soo baxa munaasabadda galabta, mar dhaw ayaan idin soo gudbin doonaa akhristayaal.
Cali Cilmi Maraykan & Yusuf C. Baxnaan oo u jawaabay wasiirka kalluumaysiga ee Puntland Maxamed Faarax Adam.
Dr. Fatima Xuseen oo aan ka waraysanay barnaamijka daryeelka & caafimaadka xoolaha laga dhoofiyo maxjarka Bossaso.